आजको तस्वीर : … सापको खल्तीमा कति आउँछ कुन्नि ? – ebaglung.com
आजको तस्वीर : … सापको खल्तीमा कति आउँछ कुन्नि ?
२०७४ चैत्र २६, सोमबार ०९:१२	Top News, अन्य समाचार
बागलुङ २०७४ चैत २६ । बलेवा बिमानस्थलमा नियमित बिमानसेवा सन्चालन गर्न बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले तारा र नेपाल वायुसेवासंग गरेको संझौतालाई लिएर चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ । बिमान सेवा सन्चालन गर्न गरिएको संझौताले नगरपालिकाले त लाखौँ रकम हर्जना बापत बिमान कम्पनिहरुलाई बुझाई रहनु परेको छ भने चर्को भाडा कायम गरिएपछी यात्रुहरुको हितमा पनि बिमान सेवा रहेन ।
बिमान सेवा सन्चालन गर्न नगरप्रमुख पौडेलले बिमान कम्पनिहरुसंग गरेको संझौता बाहिर आएपछी आम जनताबाट यसको व्यापक बिरोध भएको छ । कति ले त यस संझौतालाई भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषित गरिरहेका छन्, कतिले नगरपालिकालाई जनताले बुझाएको करको दुरुपयोग भनेका छन् भने कसैले गाईमारी गधा पोस्ने काम भयो भनि कुरा काटिरहेका छन् ।
बिमानमा यात्रुको अभाव हुन नदिन पछिल्लो पटक नगरपालिकाले केहि व्यक्तिहरु (संस्था)लाई सहयोग भनेर रकम दिने अर्कोतिर ती व्यक्ति वा संस्थामा आवद्ध महानुभावहरु त्यो रकमले बिमानको टिकट काटेर काठामाडौ उड्ने गरेको पनि चर्चा बाहिर नआएको होईन ।
र अहिले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा ‘एक उडान गरे बापत मेयर सापको खल्तीमा कति पैसा आउछ कुन्नि ?’ भनेर प्रश्न तेर्साउन समेत बाँकी राखेका छैनन् ।
प्रवास: ए वान नेपाल स्पोर्ट क्लबको आयोजनामा ओसकामा बैशाख २ गते सांगीतिक धमाका !
जनता माबि पेयूँथन्थापको नतिजा प्रकाशित : विद्यार्थीको उज्ज्व भविष्यको कामना- श्री